Nin Soomaali ah oo haweenay Maraykan ah mindi ku dilay gudaha magaalada London - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldNin Soomaali ah oo haweenay Maraykan ah mindi ku dilay gudaha magaalada London
August 4, 2016 Abdi Omar Bile World 0
Shaqaalaha nadaafada oo nadiifinaya barxada uu weerarka ka dhacay ee Russell square ee London.
London-(Puntland Mirror) Nin Soomaali ah oo 19-jir ah haystana dhalashada dalka Norwey ayaa mindi ku dilay haweenay Maraykan ah, sida ay sheegeen booliiska.
Weerarka ayaa ka dhacay barxada Russell Square ee gudaha magaalada London maanta oo Khamiis ah.
Sida loo malaynayo haweenayda dhimatay ayaa jirtay 60-sanno.
Ninka ayaa sidoo kale weerarka mindida ah ku dhawaacay ilaa iyo afar qof oo u dhashay Australia, Britain, America iyo Israel.
Booliiska London oo gacanta ku dhigay ninka wax dilay wax yar kadib markii uu weerarka geystay ayaa sheegay in aysan ku hayn ninkaas wax cadayn ah oo muujinaya xagjirnimo.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in ninka weerarka geystay uu dhanka maskaxda ka xanuunsanaa.
August 4, 2016 Somali knife attacker kills American woman in London